Virus ကို လက်တွေ့ရေးကြည့်မယ် Mediafire ကိုအသုံးပြုပြီး .Bat တို့ .exe တို့ပါဖန်တီးဖြစ်မယ် | အိုင်တီဖိုးသားလေး(နည်းပညာ)
Virus ကို လက်တွေ့ရေးကြည့်မယ် Mediafire ကိုအသုံးပြုပြီး .Bat တို့ .exe တို့ပါဖန်တီးဖြစ်မယ်
Posted by တော်ဝင်မင်းသားလေး | Labels: E Book, နည်းပညာ ဗဟုသုတ
Virus လက်တွေ.ရေးကြည်.မယ် mediafire ကိုအသုံးပြုပြီး .bat တို. .exe တို.ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးမယ် at 3:29 AM မျှဝေသူ : မြန်မာပြည် လူငယ် မင်္ဂလာပါဗျာ....ကျွန်တော်ကောင်းခန်.ပါ ဒီနေ.မြန်မာပြည်လူငယ်ပရိတ်သတ်အတွက် တင်ဆက်ပေးမဲ့အကြောင်းအရာကတော့ virus ရေးနည်းပဲဖြစ်ပါတယ်virus ပဲရေးရေး ဘာအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဆင်ပြေပါတယ် virus ရေးဖို.ဆိုရင် ကိုယ်ဖေါ်တဲ့ဆေးကိုယ်အရင်စားရသလိုပါပဲ ရေးလိုက်တဲ့ virus က အရမ်းစွမ်းနေရင်စက်က သုံးရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး.... အခုနည်းက စက်လဲပျက်မှာမကြောက်ရတော့ဘူးဗျာ...ဒီနည်းလေးကိုတော့ နည်းပညာအနေနဲ.လောက်သာ သိထားသင့်ပါတယ် ဘယ်သူ.ဘယ်သူကိုမှလဲမလုပ်ကြဖို. တောင်းပန်ပါတယ် ...........ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး လေ့လာနေသူအဆင့်သာဖြစ်တဲ့ အတွက် ဆရာများအနေနဲ.ဒီပိုစ်လေးကို ကျော်သွားကြဖို.လဲ ကြိုပြောပါရစေ လေ့လာသူအချင်းချင်းပြန်ဆွေးနွေးတယ်လို.သာသဘောထားပေးပါ ပထမဆုံး Mediafire အကောင့်ဖွင့်ပါ mediafire အကောင့်မရှိသေးသူများ ဒီလင့်မှာ သွားလေ့လာနိုင်ပါတယ်.......အကောင့်ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ. My Files အပေါ်နားလေးမှာ အောက်ကပုံထဲကလို
စာရွက်ပုံ သင်္ကေတလေးကို နှိပ်ဝင်လိုက်ပါ
အိုကေ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ format ကို ထည်.နိုင်ပါတယ် နှစ်သက်ရာအမည်ပေးပါ ကျွန်တော်ကတော့ ( .bat ) format နဲ.ပေးထားပါတယ် ကြိုက်တာသာပေး ဗျာ .bat, .exe , .rar ပေါ့ စသည်ဖြင့်ပေးလို.ရမယ်ထင်တာပဲ :P အခုထိတော့ .exe နဲ. .bat နှစ်ခုပဲ စမ်းဖူးပါသေးတယ် facebookhack100%.exe လို.သာပေးလိုက် ခ်ခ် ဒေါင်းလိုက်ကြမဲ့အမျိုးနော်.... ဒါ့ကြောင့် လဲ ဒီနည်းလေးဝေမျှပေးရတာပါ ကိုယ်က သူများကိုအရင်လုပ်ဖို.မစဉ်းစားခင် ကိုယ်ခံရမဲ့အကွက်လေးတွေရှိတယ်ဆိုတာ သိစေချင်လို. ရှယ်ပေးတာပါ ...ကဲ့ဆက်သွားရအောင်ဗျာ ကျွန်တော်က တော့ သန်.ရှင်းရေးလုပ်ဖို.အတွက် ဆောက်ပြမယ် ဗျာ virus ကုဒ်လဲ မသိလို. ဗျာ.. :P အိုကေ clean.bat နဲ. save လိုက်ပါပြီ အောက်က ပုံလေးထဲ မှာ ကြည်.လိုက်ပါ
အခုကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့ နံမည်နဲ. .bat ဖိုင်လေး ဆောက်ပြီးသွားပါပြီ ဒါဆို အောက်ပုံမှာပြထားသလို
edit ဆိုတာလေးကို နှိပ်ဝင်လိုက်ပါ New tab အနေနဲ. clean.bat ဖိုင်လေးပွင့်လာပါမယ်.........
ပုံထဲမှာ ကြိုက်တာရေးကြိုက်တာရေး ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးထားပေးတဲ့ နေရာမှာ code လေးတွေထည်.နိုင်ပါပြီ ဘယ် code တွေထည်.ရမယ် ဆိုတာတော့ ကျွန်တော်မပြောချင်တော့ပါဘူး ပြောလိုက်ရင် ဆေးထိုးအပ်ချွန်ပေးသလိုဖြစ်နေမှာဆိုးလို.ပါ .........ကျွန်တော်ဒီပို.စ်ကို ရှယ်တယ်ဆိုတာကလဲ မကောင်းတဲ့စိတ်လုံးဝမပါပါဘူး ကိုယ်တိုင်မခံရဖို. သာရည်ရွယ်ပြီးရှယ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်.......အိုကေ ပြီဆိုရင် Save ကို နှိပ်လိုက်ပါ
ပြီးသွားရင်တော့ share ဆိုတာကို နှိပ်ပြီး အောက်က ပုံလေးထဲကလို ဒေါင်းလင့် ယူနိုင်ပါတယ်
ဒေါင်းလင့် copy မှတ်ထားပြီး ဒေါင်းယူနိုင်ပါပြီ မမှတ်ထားချင်လဲနောက်မှပြန်မှတ်ပေါ့... အောက်ကပုံထဲမှာ ဆက်ကြည်.လိုက်ပါ
ကျွန်တော်ကတော့ ဘာcode မှမထည်.ထားလို. ဒေါင်းပါမယ် ဒီလို .bat နဲ.save ထားတဲ့ဖိုင်တို. .txt နဲ.save ထားတဲ့ဖိုင်တို.ဆို မဒေါင်းခင် view နဲ.အရင်ကြည်.သင့်တယ်လို.လဲ တစ်ခါထဲ အကြံပေးလိုက်ပါရစေ
အိုကေပါပြီ ကျွန်တော့ကွန်ပြူတာမှာ .bat နဲ. save ထားတဲ့ ဖိုင်လေးရောက်နေပါပြီ ကျွန်တော်ကတော့ အထဲမှာဘာမှ save မထားလို.ဒေါင်းရဲတာပါ :P :P :P ..........အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေဗျာာာာာ http://myanmarpyiyouth.blogspot.com